iLA Silk သည်အဆင့်အတန်းမြင့်မားသည့်စီးပွားရေးမိုဘိုင်းလ်ဖြစ်သည် Androidsis
iLA Silk သည်စျေးနှုန်းချိုသာပြီးအရည်အသွေးကောင်းမွန်သောမိုဘိုင်းလ်ဖုန်းဖြစ်သည်
ဘာစီလိုနာတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောကြီးမားသောနည်းပညာဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်ဖြစ်သည့် Mobile World Congress ပြီးနောက်ရက်သတ္တပတ်များစွာအကြာတွင်ဆိပ်ကမ်းအမြောက်အများကသူတို့ကိုယ်သူတို့လူသိများလာခဲ့ပြီးမိမိတို့ကိုယ်ကိုကျွန်ုပ်တို့အချိန်အတန်ကြာသိခဲ့ပြီးသောအရာများအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောအခြားနည်းလမ်းများအဖြစ်တင်ဆက်ခဲ့ကြသည်။ ဒါကြောင့် Xiaolajiao ကုမ္ပဏီရဲ့လက်အောက်ခံဖြစ်တဲ့ iLA Mobile လိုကုမ္ပဏီမျိုးကိုတင်ပြခဲ့တယ် iLA Silk သည်မိုဘိုင်းဖုန်း၏အောင်မြင်မှုအတွက်ရေငတ်နိုင်သောစွမ်းဆောင်ချက်ပါရှိသည်.
ဒီဖုန်းကိုပြီးနောက်လူသိများခံရဖို့လာပါတယ် iLA Xထိုအချိန်ကကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သော iPhone X ၏မျိုးပွားများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်, ၎င်းသည်လူကြိုက်များမှုအချို့ရရှိသော်လည်းအမှန်မှာ၊ ယခု iLA သည်သမားရိုးကျဒီဇိုင်းကိုရွေးချယ်သည်၊ သို့သော်တစ်ချိန်တည်းမှာပင် iLA X. ထက်မူရင်းပိုသည်။
အဆိုပါ iLA ပိုးအနည်းငယ်ပို။ လာပါတယ် ဆု ၎င်း၏ဒီဇိုင်းနှင့်ကျောအပေါ်တောက်ပလူမီနီယံ finish ကိုကြောင့်အနိမ့်ဆုံး ၁၈: ၉ format နဲ့ ၁၄.၄၄ x ၇၂၀ ပစ်ဇယ်ရှိတဲ့ ၅.၇ လက်မ HD + resolution ဖန်သားပြင်ကိုထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ဘေးအနားအနားတွေအပြင် 5.7D curved glass အောက်မှာကာကွယ်ပေးထားတယ်။
ဒီဖုန်းထဲမှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် Qualcomm Snapdragon 430 octa-core 53GHz Cortex-A1.4 ပရိုဆက်ဆာနှင့် Adreno 505 GPU နှင့်အတူရင်ဆိုင်နေရသည်။သိုလှောင်မှုပမာဏ ၆၄ ဂရမ်သိုလှောင်နိုင်သည့်သိုလှောင်နိုင်မှုပမာဏသည် 4GB အထိသိုလှောင်နိုင်ပြီး ၃၀၀၀ mAh ဘက္ထရီပါ ၀ င်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဗီဒီယိုတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့နိုင်သည်မှာ - iLA Silk တွင် 13MP + 2MP dual နောက်ကင်မရာတပ်ဆင်ထားသည် iLA က၎င်း၏ dual-camera setup သည်မှန်ကန်သည်ဟုဆိုထားသည်။ မှန်ဘီလူးအတုများကို gimmick ကဲ့သို့သောအခြားစမတ်ဖုန်းများနှင့်မတူပါ။ iLA Silk သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် mode ကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည် ပိုကောင်းသော Bokeh အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖန်တီးလိုပုံရိပ်တွေအတွက်ကင်မရာနှစ်လုံး။
ဓာတ်ပုံဆိုင်ရာဆောင်ပုဒ်နှင့်အတူဆက်လက်, dual-main camera တွင် LED Flash နှင့် fingerprint reader တို့ပါရှိသည်ရှေ့မျက်နှာပြင်မှာ 16 megapixel အာရုံခံကိရိယာတပ်ဆင်ထားသည်။ ထို့အပြင်အခြားသက်ဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ပတ်သက်။ Android 8.1 Oreo ကိုအသုံးပြုထားသည်၎င်းသည် 4G LTE ဆက်သွယ်မှုကို Dual SIM အထောက်အပံ့၊ 802.11ac WiFi, Bluetooth နှင့်ပြီးပြည့်စုံသော GPS + GLONASS တည်နေရာစနစ်ရှိသည်။
သတိပြုသင့်သည်မှာဒုတိယ iLA model မှ“ Let Love Return” ခေါင်းစဉ်ဖြင့်အများပြည်သူအကျိုးခံစားခွင့်အစီအစဉ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ iLA Mobile မှကမ္ဘာသို့တင်ပြလိုသောတရုတ်တိုင်းရင်းသားများပစ္စည်းများကိုသိမ်းဆည်းခြင်းအကြောင်း။ ထို့ကြောင့် iLA Mobile သည်ပန်းချီအလုပ်ရုံတစ်ခုကိုဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီး၊ ပန်းထိုးသူများအားသူတို့၏အလုပ်များကိုပြင်ပကမ္ဘာသို့ပို့ဆောင်ပေးသည် ၎င်းတို့၏ရိုးရာတရုတ်လက်မှုပစ္စည်းများကိုသူတို့၏ထုတ်ကုန်အသစ်နှင့်ပေါင်းစပ်လိုက်သည်; သေတ္တာနှင့်သေတ္တာကိုပန်းထိုးခြင်းနှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ iLA Silk ကို ၀ ယ်သူတိုင်းသည်အထူးဒီဇိုင်းသေတ္တာကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်.
နောက်ဆုံးဒီ terminal ကိုရရှိနိုင်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ သငျသညျမတ်လ 28 ရက်ကနေရနိုင်သည် ဖြတ်. ဒီ link ကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၅၉.၉၉ သာလျှင်၊ ယူရို ၁၃၀ ခန့်ဖြစ်မည်။ ဤသည်မတ်လ 159.99 ရက်အထိတရားဝင်လိမ့်မည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက, သွားရောက်ကြည့်ရှု iLA တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်, သို့မဟုတ်သင်လည်းသင်၏ရိုက်ထည့်နိုင်ပါတယ် Facebook မှာပရိုဖိုင်းကို ဒီ link ကတဆင့်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » iLA Silk သည်စျေးနှုန်းချိုသာပြီးအရည်အသွေးကောင်းမွန်သောမိုဘိုင်းလ်ဖုန်းဖြစ်သည်
Xiaomi Mi Mix 2S ၏ပုံရိပ်အသစ်များ
Xiaomi Mi6သည် Project Treble နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်